Apple dia manolotra anay ny mpanonta Ultimaker 3+ 2D amin'ny tranokala misy azy | Avy amin'ny mac aho
Pedro Rodas | | Accessories, Solosaina Mac
Rehefa mandeha ny volana dia hitantsika ny vidin'ireo mpanonta ireo izay an'arivony tapitrisa euro tany am-boalohany, dia afaka mahita azy ireo ambanin'ny iray alina Euros isika. Na izany aza, toy ny amin'ny zavatra rehetra, misy mpanonta sy mpanonta ary ny vidiny dia miankina amin'ny tanjon'ny zavatra ilaintsika azy.
Afaka manana mpanonta 3D izahay avela hanao pirinty miaraka amin'ny loko filament tokana, ireo mpanonta izay mampifangaro loko roa na koa mpanonta izay efa manonta amin'ny zavatra biolojika hanaovana sakafo. Lavitra, Lafiny iray tokony hodinihina ny haben'ny sanganasa farany azo namboarina tamin'ity karazana mpanonta ity.
Efa nanandrana mpanonta 3D hafa amin'ny Mac ve ianao? Apple dia manana departemanta miandraikitra ny fanombanana ireo vokatra amidy na amin'ny magazay ara-batana na amin'ny fivarotana an-tserasera ary amin'ity tranga ity dia nisafidy mpanonta 3D manokana izay andehanantsika asehoy anao anio. Izy io dia mpanonta izay azonao ampiasaina amin'ny Mac amin'ny fomba tena tsotra ary miantso ny tenany ho mpanonta 3D Ultimaker 2+.
Amin'ity mpanonta ity dia azonao atao ny mamorona sy mamolavola ny hevitrao, ary koa mamorona prototypes an'ny singa azo ampiharina amin'ny sehatry ny asanao. Tsotra be ny fampiasana an'ity mpanonta ity ary manara-penitra miaraka amin'ny rindrambaiko Cura maimaim-poana izay mahatonga anao hanomboka eo amin'ny tontolon'ny fanontana 3D haingana sy mora.
Ny mpanonta dia manana extruder mahery vaika sy rafitra mangatsiaka mitazona ny mari-pana ambany. Ny vidiny ao amin'ny tranokala Apple dia 2.279,00 euro miaraka amin'ny VAT.
Ho fampahalalana fanampiny, ny tranokala Apple dia milaza hoe:
Fanontana 3D matihanina miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny fanontana 300mm / s.
Fanapahan-kevitra hatramin'ny mikrô 20 mba hahatratra ny famaranana tonga lafatra.
Famolavolana matevina miaraka amin'ny habetsahan'ny pirinty.
Ahitana horonam-pirinty 0,25mm, 0,4mm, 0,6mm ary 0,8mm azo ovaina ho an'ny famaranana marina.
Misokatra ny firafitra hahafahanao mampiasa filamenta samihafa.
Rindrambaiko fanontana maimaim-poana mitarika indostrialy miaraka amin'ny fikirana fototra sy mandroso.
Mizarà hevitra sy torohevitra amin'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera Ultimare.
Sintomy ny fampiharana Ultimaker ary mahazoa fanampiana am-panomanana, torolàlana ho an'ny mpampiasa ary maro hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Apple dia manolotra antsika ny mpanonta Ultimaker 3+ 2D amin'ny tranokalany manokana